Resilience | Reef Resilience
Ny fiarovana ara-tsakafo haran-dranomasina izay marefo kokoa amin'ny fiantraikan'ny lozisialy manerantany sy eo an-toerana dia tsara kokoa ny manohitra sy miverina.
Ny haran-dranomasina dia anisan'ny tontolo iainana maharitra indrindra eto an-tany, ary tsy vovo-tany ho an'ny zava-manan'aina maro, fa manome serivisy sy tombontsoa ara-toekarena tsy tambo isaina ho an'ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana. Mampalahelo fa ao anaty krizy ny haran-dranomasina maneran-tany. Nandritra ny am-polony taona faramparany, ny adin-tsaina manerantany mifandraika amin'ny fiovan'ny toetr'andro dia nekena ho loza mitatao ho an'ny tontolo iainana haran-dranomasina. Ny fitambaran'ny fandrahonana manerantany sy eo an-toerana dia niteraka ny fihenan'ny vondrom-bahoakam-be manerana an'izao tontolo izao.
Ny mpitantana dia afaka mandray andraikitra hanohanana ny faharetan'ny haran-dranomasina, izay mitahiry ireo zavaboary manan-danja ireo ho an'ny taranaka ho avy. Ny fiompiana harena an-dranomasina izay manamafy kokoa ny fiantraikan'ny loza maneran-tany sy eo an-toerana dia mety ho tafavoaka velona amin'ny ho avy.
Ity fizarana ity dia manome topy maso ny fitsipika lehibe momba ny tontolo iainana haran-dranomasina, ny tontolo iainana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy ary ny fomba ampiharany amin'ny tontolo iainana haran-dranomasina sy ny fitsipiky ny fomba fitantanana mifototra amin'ny faharetana. Raha mila fampahalalana lalina kokoa dia raiso ny Coral Reef Resilience Online Courses. Vakio a famaritana ny Mazava ho azy or misokatra amin'ny varavarankely vaovaomisoratra anarana amin'ny Mazava ho azy.
Haran-dranomasina mivelatra any Samoa Amerikanina. Sary © Shaun Wolfe / Ocean Image Bank